Umxokelelwano wokunikezela: ukwenza iimveliso zeApple eMelika akunakuphepheka | IPhone iindaba
Ikhonkco lokuhambisa lithi ukuvelisa iimveliso zeApple eMelika akunakwenzeka
Ekuqaleni konyaka, uDonald Trump wenza ingxelo apho aqinisekisa khona inganyanzela iApple ukuba yenze "iikhompyuter zayo ezilahlekileyo" eMelika. Ingxaki kukuba, ngelo xesha, bambalwa kuthi abakholelwa ukuba yayiza kuzalisekisa isoyikiso sayo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, esinye sazo yayikukuba abantu baseCupertino abanakufumana zibonelelo zininzi kangako ukuba benza izixhobo zabo ngaphandle kwe China. Ngoku ibiyi itsheyini yonikezo isuka kuApple oyithethileyo lo mbono awunakwenzeka.
Kodwa ngaphambi kokunikezelwa kweTshayina, u-CEO we-Apple uTim Cook wayesele etshilo ukukwazi ukwenza imveliso yeapile akukho eUnited States Kwaye ababoneleli bayo sele benze isigqibo sokuba basebenze ukuhlangabezana nomceli mngeni wokuhambisa izixhobo ezininzi ezikumgangatho ophezulu. Ukongeza, iApple ukuzama ukwanelisa iminqweno kaTrump ayizukuthetha ukuba idale imisebenzi kwilizwe laseMntla Melika, konke oko ngokukaCook.
Ukuthengiswa kweTshayina kuyavumelana noTim Cook: ukwenza iimveliso zeApple eMelika akunakulunga
Ekuqaleni, iApple yayiza kwenza iimveliso zayo eTshayina ukonga imali, kodwa ingxelo yatsho njalo zibenze e-USA ngekhe zibize kakhulu, ukongeza i- $ 30-40 kwixabiso le-iPhone. Ngokwam, ingxelo ethi "ngekhe ibize kakhulu" indenza ndihlekiswe yile mibuzo ilandelayo: ngubani oza kuthwala ezo ndleko? Abasebenzisi?
Ngayiphi na imeko, ukusukela oko uDonald Trump wanikela intetho yakhe emva kokuphumelela kunyulo, sonke saqala ukuqonda ukuba odumileyo mogul wadlala ngokwakhe ukuya kwi-White House, kodwa loo nto ayithembisileyo ayizukufezeka. Omnye umzekelo kukugxotha abantu baseMexico abaninzi, abathi kamva batshintsha babagxotha nje abambalwa benerekhodi zolwaphulo-mthetho. Nokuba kunjalo, ndiyathemba ukuba asingabo abasebenzisi abagcina behlawulela izitya ezaphukileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ikhonkco lokuhambisa lithi ukuvelisa iimveliso zeApple eMelika akunakwenzeka
Ndihlala ndifunda iindaba ze-iPhone kodwa eli nqaku lisuka kwinyani kwaye liba yinkohliso. Akukho ndlela yakuthethelela iimfuno ezinkulu ze-Apple zazo zonke iimveliso zayo. Kwaye kuncinci kunokubakho ukuxhasa ukuveliswa kwayo kuphela e-China. Ngaba ngenene uPablo usinike isizathu esivakalayo sonyuso sama-40 eedola kwi-iPhone ukwala ukuzenza eNtshona? Kutheni kungenakwenzeka ukwenza njalo? Akukho sizathu ngaphandle kwembuyekezo yabucala egqithisileyo. Yiyo kanye le nto yokufuduswa kwemveliso yoshishino ekhokelela ekwehleni kwemfuno yasekhaya kumazwe kwaye ekugqibeleni ibe ziimeko zomjikelo kunye nokuvela kwakhona. I-iPhone kunye neMac kufuneka zenziwe e-US nakwi-EU, ayenziwa e-China nge-200 euros kwaye ithengiswe apha nge-400%. Ukuba iApple ikhusela imveliso yesithathu yehlabathi ke yinkampani yehlabathi yesithathu.
Uhlelo lokusebenza olusemthethweni lweReddit luhlaziyiwe kwaye lubandakanya inkxaso esemthethweni ye-iPad
I-Apple ipapasha incwadi kuyilo lweemveliso zayo